Gudoomiyihii xilka laga tuuray ee Puntland oo ka hor yimid mooshinka xilka looga qaaday – Somali Top News
Gudoomiyihii xilka laga tuuray ee Puntland oo ka hor yimid mooshinka xilka looga qaaday
November 7, 2019 November 7, 2019 Somali Top News	0 Comments Gudoomiyihii xilka laga tuuray ee Puntland oo ka hor yimid mooshinka xilka looga tuuray
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
Gudoomiyaha oo la hadlay BBC Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in uu wali yahay Gudoomiyaha Sharciga ah ee baarlamaanka Puntland.
“Waxaanu leenahay nidhaam iyo hannaan; waxaanu leenahay shuruuc uu ugu sarreeyo dastuurka. Haddaanu nahay Baarlamaanka, waxaan leenahay xeer-hoosaadka golaha. haddaanu labadaa midna waafaqsanayn, waa xaaraan, waxna kama jiraan, mana ansaxayo”, ayuu yiri Dhoobo.
Xildhibanaada Barlamaanka Puntland ayaa saaka u codeeyay “xilka ka qaadista” Guddoomiyaha Barlamaanka, Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana xil ka qaadistiisa u codeesay 49 mudane, halka 4 xildhibaanna ay ka aamustay.
Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Puntalnd Abuukaate Cabdicasiis ayaa kudhawaaqay in sidaas xilka looga qaaday gudoomiyihii Baarlamanka Puntland oo aanan ka soo qeybgalin kulankaas xilka looga “xayuubiyay”.
Soo jeedinta xil ka qaadista oo “xalay la gudbiyay” waxaa ku saxiixnaa 44 xildhibaan, sida uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Puntland.
← Sheekh Shariif: Waxaan shaki ka qabnaa ciidamo ay NISA qoreyso xilli habeen ah oo labo dal loo dirayo
Mareykanka oo baaq u diray DF, Xisbiyada mucaaradka iyo maamul Goboleedyada →
Maxey kawada hadleen Axmad Madoobe iyo wafdi ka socday Midowga Yurub?
February 26, 2019 Somali Top News 0
CODSI: “qofkii Madaxweyne Farmaajo xiriir la leh fadlan fariintaan ha iga gaarsiiyo”
October 13, 2019 Somali Top News 0
Xaaji Ciraaqi ah oo iska soo tuuray dabaqa sare ee Masjidka Xaramka
August 26, 2018 Somali Top News 0